Meizu Pro 6, nyocha nke ọkọlọtọ ọhụrụ nke onye nrụpụta Asia | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Meizu, Nyocha
Meizu Ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta ahụ nke na-eji nwayọ abanye n'ahịa ndị Europe site n'igosipụta ndị nwere ezigbo echiche. Ọ bụ eziokwu na Huawei bụ eze ahịa ndị China, mana Meizu amalitela ịbụ ntụpọ doro anya ma n'ime ma n'èzí Eshia.
Ugbu a anyị ewetara gị otu zuru ezu Meizu Pro 6 nyocha, ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ga-eju gị anya na ogo nke njedebe na ikike ya. A elu-ọgwụgwụ na Ọ na-efu 449 euro ma ị gaghị enwe mmechuihu.
1 Meizu Pro 6 pụtara maka ogo nke njedebe ya
2 Nka na ụzụ e ji mara Meizu Pro 6
3 Meizu nzo na teknụzụ AMOLED na ihuenyo ya ma ọ bụghị ihe ọjọọ
4 Igwefoto ga-eju gị anya na ike ya
4.1 Osisi ihe oyiyi ejiri na Meizu Pro 6
5 Flyme 5.6, interface dị ọcha bloatware
6 Nnwere onwe nke na-abụghị nke fọdụrụ nke nkọwa
7 Ezigbo ụda ọdịyo
Meizu Pro 6 pụtara maka ogo nke njedebe ya
Ihe izizi ị chere maka mgbe ị hụrụ Meizu Pro 6 bụ nke ahụ Ọ nwere ahịrị ndị yiri nke ụfọdụ Apple ma ọ bụ nke ụdị HTC. Ọ dị mma, ọ bụ eziokwu na imewe eji eme ihe bụ otu maka afọ ole na ole, mana o doro anya na Meizu a hasụla, sịnụ, isi mmalite ndị ọzọ, iji mepụta ọnụ ya. Ọ dịghị ihe ọhụrụ n'okpuru anyanwụ.
N'ezie, anyị na-ahụ ahụ mara mma ma dịkwa mma wuru ya kpamkpam na igwe na-enye ekwentị ọhụrụ ahụ aka mara mma. Maka nke a, onye nrụpụta ahọrọla iji wuo ahụ na otu ngọngọ, na-enye mgbanwe n'etiti etiti ahụ na ihuenyo pere mpe.
Site na nke a, ha emezuola na Meizu Pro 6 nwere a nnukwu mmetụta nke anwụ ngwa ngwa, na mgbakwunye na ịbụ ezigbo njikwa ekwentị na-enye ekele maka nha ya, 147.7 x 70.8 x 7.3 mm. Onwe m, ọ masịrị m na igwe ahụ na-atụle ka gram 160 ha dị ka o zuru oke.
A ga-agbakwunye na nke a bụ eziokwu ahụe mgbe ọnwa ejirila na-enweghị ụdị mkpuchi ma ọ bụ ihe nchebe ọ bụla, Meizu Pro 6 na-atachi obi na-enweghị nhụjuanya ụdị akara ọ bụla. Ihe dị ịrịba ama na njedebe nke njirimara ndị a.
Na ihu nke Meizu Pro 6 anyị na-ahụ ya Ngosipụta nke 5.2 nke gosipụtara obere bezels site nana-eme ka ihe kachasị nke ọnụ ọnụ. Ọ bụkwa ebe ha chọtara igwefoto dị n'ihu na ọkà okwu n'elu, ma na ala anyị ga-ahụ bọtịnụ Home ya, nke na-arụkwa ọrụ dị ka ihe mkpịsị aka mkpịsị aka ya na ihu ya na-arụ ọrụ iji meghachi omume na mmegharị ahụ.
Azụ nwere igwefoto bụ isi, nke dị na mpaghara elu, yana n'okpuru enwere ọkụ ọkụ nwere akara Meizu. Naanị akụkụ nke na-agbaji ihe ịchọ mma bụ mpaghara nke antenna ahụ, ọ bụ ezie na ọ naghị ewepụ ihe ngosi dị egwu nke Meizu Pro 6.
El Isi ekweisi dị na ala nke ọnụ, ihe m na-adịghị amasị nke ukwuu, ma dị nnọọ ka nke nke nke ibu, banyere mmasị na agba. Chetara onye okwu ya okwu nke ọma, edobere ya nke ọma na nke ahụ na-enye gị ohere ịnwekwa ụda olu dị mma ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị ejiri obere oge kpuchie ndapụta ya.
M kwuru, sị Meizu Pro 6 bụ ekwentị echekwara nke ọma n'ihe gbasara imepụta na nke ahụ na-egosi ezigbo ọrụ nke ndị nrụpụta na nke a. Maka na agwalarị m gị na ọhụụ Meizu ọhụụ dị ka ọnụahịa adịchaghị na nke mbụ ma i were ya, ị kwadoro na ị na-eche ekwentị dị elu ihu.
Nka na ụzụ e ji mara Meizu Pro 6
Akụkụ 147.7 x 70.8 x 7.3 mm
Usoro njikwa Android 6.0 Marshmallow n'okpuru Flyme 5.6 omenala oyi akwa
Ihuenyo 5.2-anụ ọhịa AMOLED nwere mkpebi 1920 x 1080 pixel na 424 dpi
Nhazi 25-isi MediaTek Helio X10 (2 Cortex - A72; 4 Cortex - A53; 4 Cortex A53) 2.5 GHz
GPU Mali-T880 MP4 na 850MHz
Nchekwa n'ime 32 GB ma ọ bụ 64 gb dabere na ihe nlere anya nke a site na MicroSD ruo 256 GB
Igwefoto na-aga n'ihu Ihe mmetụta 21 megapixel nwere autofocus / nchọpụta ihu / panorama / HDR / Dual-tone LED flash / Geolocation / 1080p ndekọ vidiyo na 30fps / f / 2.2
Atụmatụ ndị ọzọ ngwa Nchaji usoro / Mkpisiaka mmetụta
Batrị 2.560 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Ahịa 449 euro
Ke akpa ilekiri o yiri ka Meizu Pro 6 bụ ezigbo ọnụ ahịa Ma olee otu onye nyocha gị nke Mediatek Helio X25 ga-eme? Anyị maara na ọ bụ ụdị nke X20 ka mma, mana ọ ga-abawanye? Azịza m bụ ee n'eziokwu.
Ma obu na SoC X25 tinyere 4 GB nke Ram Ndị dị na Meizu Pro 6 na-enye ekwentị nnukwu ike, na-enye gị ohere ịmegharị egwuregwu ọ bụla na-enweghị nhụjuanya ụdị nkwụsị ọ bụla n'oge egwu.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na anyị ejiri ngwa chọrọ ma ọ bụ mepe windo ole na ole, Pro 6 na-eguzogide na-enweghị nsogbu nke osisi anyị. Naanị ma? Unkpọghe nke ihuenyo na-ata ahụhụ ụfọdụ na-egbu oge enwere ike kpatara ya site na njikwa na-ezighi ezi nke ọnọdụ ụra. Ajọ ihe njọ nke na-akpasu iwe mana ọ naghị emerụ ya kwa ụbọchị yana enwere m olileanya na mmelite n'ọdịnihu ga-edozi.
El mkpisiaka agụ na-arụ ọrụ nke ọma nke ọma kwa na-enye oge kariri oge nzaghachi na oke nkenke na-enye ohere, dịka ọmụmaatụ, nyochaa mkpịsị aka site n'ọtụtụ ọnọdụ na-enweghị nsogbu ọ bụla iji mata ya.
Anyị enweghị ike ichefu banyere Mmegharị aka na ihe mmetụta nke biometric nke na-enye gị ohere iji bọtịnụ Home rụọ ọrụ multitasking ma ọ bụ laa azụ. Iji hụ ọtụtụ nhọrọ anyị ga-amịpụta mkpịsị aka anyị site na mpụga ime n'ime ihuenyo ahụ na ala mgbe anyị na-enye aka dị mfe na bọtịnụ etiti anyị ga-adọghachi azụ. Na mbu o were m otutu ihe iji ya mara ya, m wee kọchaa oge mgbe Meizu mejuputara sistemụ a, mana ozugbo ị maara ya, eziokwu bụ na ọ bụ usoro ntụsara ahụ na nke amamịghe iji.
Meizu nzo na teknụzụ AMOLED na ihuenyo ya ma ọ bụghị ihe ọjọọ
Meizu Pro 6 nwere a 5.2-inch ihuenyo mejupụtara ihe AMOLED panel arụpụtara site na Samsung. More na ndị ọzọ na-emepụta na-ịkụ nzọ na ngwọta nyere site Samsung na eziokwu bụ na ọ bụ a maara ihe mkpebi.
con 424 pikselụ kwa inch Ihuenyo Meizu Pro 6 dị ezigbo mma na-enye ebe dị ọkụ na nke doro anya nke agba dịkarịa ala karịa, na mgbakwunye na ịnye ndị ojii zuru oke, dịka ọ dị na mbụ na ụdị ngebichi a.
Omenala interface nke Meizu Pro 6, Flyme 5.6 na-enye ohere Họrọ site na ntọala atọ dị iche iche site na ngwa nju oyi ka nke dị ọkụ. N'ezie, àgwà ahụ enweghị ihe ọ bụla gbasara ihe Huawei na-enye. N'ihe banyere Meizu Pro 6, ọnọdụ a na-ekpo ọkụ bụ oroma agba niile ka ọ ka mma ịhapụ ya ka ọ dị ma kwụsị ịnwale.
Kemgbe LG webatara Knock On usoro, imirikiti ndị nrụpụta amalitere na bandwagon. Na Meizu Pro 6 agaghị abụ ihe ọzọ. N'ụzọ nke a Anyị nwere ike ịgbalite mgbata abụọ iji gbanye ma gbanyụọ ihuenyo ahụ. Tụkwasị na nke a, a ga-enyefe onye na-agụ akara mkpịsị aka a, nke ka bara uru n'echiche m.
Anyị enweghị ike ichefu maka eziokwu ahụ na ihuenyo nke Meizu Pro 6 webatara Force Touch technology, na-enye gị ohere ịme mmegharị ụfọdụ dịka ị na-arụ ọrụ menu nke abụọ site na ịpị bọtịnụ ka ogologo.
Mana ọ bụghị ihe niile bụ ozi ọma: akụkụ nlele karịrị nke ziri ezi mana Meizu Pro 6 na-ata ahụhụ nke ukwuu n'èzí n'ihi nits 350 nke ihuenyo ya nwere, na-efunahụ ọtụtụ visibiliti na ụbọchị na-enwu gbaa, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anwụ anaghị acha na ihuenyo.
Igwefoto ga-eju gị anya na ike ya
Otu n'ime atụmatụ ndị a ma ama nke Meizu Pro 6 abia na igwefoto ya di ike. Ihe mmetụta 21 megapixel nke ekwentị Meizu ọhụrụ na-enye arụmọrụ dị mma, na-egosipụta ọsọ nke njide ọ bụrụgodi na arụ ọrụ HDR arụ ọrụ.
Dị ka ọ na-adị na ọnọdụ ndị dị ala, foto na-amalite ịda mba na ụda dị egwu na-egosi, ihe dị mma maka ekwentị, n'agbanyeghị etu igwefoto ya dị mma. N'ezie, nnukwu ihe ịtụnanya na-abịa n'eziokwu na elekwasị anya anaghị ata ahụhụ n'agbanyeghị ọhụhụ dị ala, nkọwa iji banye na akaụntụ.
N'aka nke ọzọ, mgbe ị na-ese foto na gburugburu gburugburu ihe ndị a dọtara ga-eju gị anya site na ịnye agba doro anya na nkọ na elu nke kacha mma ọnụ na ahịa. Na nke a, anyị ga-agbakwunye sọftụwia dị ike nke igwefoto Meizu Pro 6, nke nwere usoro zuru oke nke ga-enye anyị oke oke iji were foto dị iche iche nwere oke mma dị egwu.
Ma obu na igwefoto igwefoto Ọ ga - enyere anyị aka ịse foto ngwa ngwa na ngwa ngwa site na ịpị bọtịnụ ahụ ma ọ bụ, ọ bụrụ na anyị bara uru, anyị nwere ike ịgbalite usoro ntuziaka iji chịkwaa oke ọ bụla dịka omimi nke mgbado anya, ISO, uche ma ọ bụ ike dị egwu.
La n'ihu igwefoto, Site na mkpebi 5 megapixel ya, ọ na-ezute atụmanya ma ga - eme ka ị pụọ n'ọtụtụ nsogbu mgbe ọ na - abịa iji selfies ma ọ bụ oku vidiyo, mana atụla anya na nnukwu gbaa sitere na ya Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị were foto dị mma, gbado anya na igwefoto dị n'azụ ya dị ike.
Osisi ihe oyiyi ejiri na Meizu Pro 6
Flyme 5.6, interface dị ọcha bloatware
Agwala m agwa gị na rue mgbe ijiri usoro ya rụọ ọrụ ọtụtụ ọrụ, ị ga-ata ahụhụ ntakịrị. Mana ozugbo ị jidere ya, eziokwu bụ na interface nke Meizu emejuputara bu nke kachasi nma m gbaliri.
Usoro ahụ dị ọcha, anyị ga-ahụ naanị ngwa ngwa Google na Goofle Maps. Ihe ọ bụla ọzọ anyị ga-ebudata onwe anyị. N'ezie, Flyme nwere ọkpọ egwu ya na onye njikwa email ya, mana m ahọrọla ịkụ nzọ na azịza Google ebe ọ bụ na ejiri m ha.
N'ikpeazụ kwuo na Meizu Pro 6, dị ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụdị Asia, nzọ na desktọọpụ dabeere na desktọọpụ, kama nke drawer a maara nke ọma nke ngwa ndị a hụrụ n'ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke ọdụ ụgbọ. Ọ dịghị ihe na-akatọ n'ihi na ị na-eji a interface na a oge.
Nnwere onwe nke na-abụghị nke fọdụrụ nke nkọwa
Ọnụ nke njirimara ndị a kwesịrị inwe ma ọ dịkarịa ala 3.000 mAh. Nsogbu bụ na Meizu kpebiri iwekota a 2.560 mAh batrị ka ọ ghara itinyekwu ọkpụrụkpụ na ekwentị. Nnukwu ndudue.
Ma ọ bụ na obodo kwụụrụ nke Meizu Pro 6 bụ ebe kachasị ike ọgwụgwụ nke ọnụ. Kpachara anya, anaghị m ekwu na ekwentị ahụ ga-agbanyụ n'etiti ehihie, mana ọ bụrụ na anyị nye ya nnukwu mbọ, ọ ga-abata n'abalị ma dịkwa mma.
M ọzọ na-eme ka o doo anya na ọ bụghị ọchịchị jọgburu onwe ya, mana amataworị m ịnwe ọnụ nke nwere batrị nke na-enye arụmọrụ otu ụbọchị na ọkara ma hụ na kwa abalị m ga-ana ekwentị na enwere m nkụda mmụọ.
Ezigbo ụda ọdịyo
Ọ bụrụ na ikike ịchị obodo emechu m ihu, elu ụda àgwà en nke Meizu Pro 6 O juru m anya. Na otutu. Na mbu mgbe m huru okwu kwuru n’ala ala, echere m na o ga na-ekpuchita ihe ndeputa ya mgbe nile mana eziokwu bu na onodu ebe etinyere ya na-eme ka o sie ike ikpuputa ntaneti nile.
El ụda dị ezigbo mma, àjà elu mma na-enweghị agbagọ ogo n'oge ọ bụla. Ekweisi emewokwa ihe edetu, na-enye nnukwu olu ma doo anya. Na nkenke, otu n’ime akụkụ kachasị ịtụnanya nke Meizu Pro 6.
Meizu Pro 6 bụ ekwentị zuru oke zuru oke ma guzozie eguzo nke na-apụ apụ maka ezigbo mma mara mma na mgbakwunye na njirimara ọrụ aka na-eto ya na mpaghara ahụ. Batrị ya dịtụ arọ na ahụmịhe onye ọrụ, ọ bụ ezie na n’usoro ụwa niile enwere m ike ịsị na Meizu arụla ọrụ magburu onwe ya na Meizu Pro 6 ọhụrụ.
Ọkà okwu na-enye ụda dị mma dị mma
Batrị ahụ dị ntakịrị ka ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Meizu » Meizu Pro 6, nyocha ohuru nke ndi Asia meputara
A machibidoro Samsung Galaxy Note 7 iwu na ụgbọ elu US niile
Akwụkwọ ahụaja kacha mma maka ihuenyo AMOLED na SuperAMOLED